(Unicode) မန္တလေး နိုဝင်ဘာ ၂၈ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ မန္တလေးမြို့ပါတီလူငယ်တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီအချိန်တွင်၊ မန္တလေးမြို့ရှိ…
ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားနိုင်အောင် ပါတီထောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူရဦးရွှေမန်းပြောကြား
(Unicode) အုတ်တွင်း နိုဝင်ဘာ ၂၄ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို မှန်ကန်စွာ ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှင်သန်ခိုင်မာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ညီညွတ်ရေးကိုလည်း ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည့် ထူးခြားချက်များ ရှိပါကြောင်း၊…
သူရဦးရွှေမန်း အာစရိယပူဇော်ပွဲသို့ တက်ရောက်ဂါရဝပြုကန်တော့
(Unicode) ကညွတ်ကွင်း နိုဝင်ဘာ ၂၄ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ ခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဇနီးဒေါ်ခင်လေးသက်တို့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မွေးဇာတိ ကညွတ်ကွင်းမြို့ရှိ…
သူရဦးရွှေမန်းနှင့် စင်ကာပူသံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
(Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူသံအမတ်ကြီး H.E. Ms Vanessa Chan Yuen Ying အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ…
သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဂျပန်သံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
(Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့၊…
(Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr Thomas Neisinger အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့၊…
သူရဦးရွှေမန်း NEI လေ့လာရေးအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် National Enlightenment Institute (NEI) ၏ လူငယ်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁၃)မှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်…
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ ××××××××××××××××××××××××××× ပုဇွန်တောင် သြဂုတ် ၁၈ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၏ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်…
ပါတီတည်ထောင်ရခြင်းအကြောင်း သူရဦးရွှေမန်း ရှင်းလင်းပြောကြား
(Unicode) အုတ်တွင်း နိုဝင်ဘာ ၁၄ “ကျွန်တော့်အသက်က ၇၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒီအသက်အရွယ်မှာ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးမှာစည်းရုံးဆောင်ရွက်မယ့် ပါတီတစ်ရပ် တည်ထောင်ဖို့ အသက်အရွယ်ကြီးသွားပါပြီ။ သို့သော် အခြေအနေက တောင်းဆိုနေပါတယ်။…